UMI MAX Famerenana amin'ny teny espaniola | Androidsis
Miverina izahay miaraka amin'ny famakafakana ireo terminal misy ny sinoa amin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny UMI MAX famerenana, mpisolo toerana UMI SUPER, miaraka amin'ny fampitaovana momba ny hardware sy ny teknika, na dia misy aza ny antsasaky ny tahiry anatiny misy izay sisa ao 16 Gb, ary raha tokony ho 4 Gb RAM misy ny UMI Super dia mijanona ao amin'ny RAM 3 GB. Izany rehetra izany dia mihodina amin'ny vatana metaly mahafinaritra miaraka amina endrika Premium izay ahafahantsika mahita kinova ao anatiny Android 6.0 Marshmallow, izany rehetra izany dia mitentina 127 euro fotsiny.
Raha tsy kely io, dia ampianay koa ny tapany aoriana iray amin'ireo sensor amin'ny rantsantanana tsara indrindra fa afaka nanao fitsapana manokana aho, ity dia terminal iray izay toa priori safidy tsara fividianana. Fa izany rehetra izany ve dia tena volamena? Manaraka, rehefa asehoko anao amin'ny famerenana horonantsary mifandraika fa namela anao ho lohan'ity lahatsoratra ity aho, ankoatry ny filazako aminao amin'ny antsipiriany ireo pitsopitsony ara-teknikan'ny UMI MAX, dia holazaiko anao koa ny isa, ny tsara indrindra Fitaovana na toetra natolotry ity mpisolo toerana ny UMI SUPER ity ary koa asongadiko manokana ireo fiasa na toetra ratsy indrindra izay tsy ananan'ity UMI MAX ity indrindra ary azo hatsaraina. Fantatrao izao, raha mieritreritra ny hividy terminal Android mora vidy ianao ary mieritreritra ny hahazo ny iray amin'ireo terminal UMI vaovao ireo, dia manoro hevitra anao aho mba hijery ilay horonantsary mifatotra sisa tavela teo am-piandohana. amin'ity lahatsoratra ity ary koa hoe mamaky ny fandalinana an-tsoratra an-tsoratra izay lazaiko ianao ny tsara sy ny ratsy rehetra atolotray ho antsika UMI MAX vaovao.
1 UMI MAX Famaritana ara-teknika
2 Ny tsara indrindra amin'ny UMI MAX
3 Ny ratsy indrindra amin'ny UMI MAX
UMI MAX Famaritana ara-teknika
Operating System Android 6.0 Marshmallow tsy misy sosona fanaingoana
efijery 5.5 "IPS 2.5D FullHD misy hakitroka 480 dpi pixel ary fiarovana Corning Gorilla Glass 3
processeur Mediatek MT6755M Helio P10 64-bit valo fotony amin'ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandro 1.8 Ghz
GPU Mali T860 fototra roa
Tahiry anatiny 16 Gb azo atsangana amin'ny alàlan'ny MicroSd hatramin'ny 256 Gb fahafaha-mitahiry fatratra
Fakan-tsary aoriana 13 Mpx novokarin'i Panasonic miaraka amin'ny stabilizer horonan-tsary ary FlashLED avo roa heny
Fakan-tsary aloha 5 Mpx miaraka amina fandraketana horonantsary HD
Conectividad DualSIM MicroSIM - 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz 4G: FDD-LTE 800/1800/2100 / 2600MHz - Bluetooth 4.1 - GPS sy aGPS - Wifi 2.4 sy 5 Ghz - Radio FM -
Fitaovana hafa Fanaraha-maso akaiky - Senseur jiro manodidina - Accelerometer - Sensatera Gravity - Mpamaky ny dian-tànana eo ambadiky ny terminal - LED Notification amin'ny bokotra Home - USB TypeC
lafiny 150.8 X 75 X 8.5
lanja Gramin'ny 204
vidiny 127 euros
Ny tsara indrindra amin'ny UMI MAX
Ahoana no ilazako foana hoe: Ny tsara indrindra amin'ny UMI MAX dia hita mivantana amin'ny vidin'ny fivarotana vokatra, na dia mamela an'izay tena miharihary aza aho, tiako ny manasongadina ireto toetra manaraka na fampiasa manaraka ireto izay mahatonga an'ity UMI MAX ity hanisy fahasamihafana raha toa ka ampitahaintsika amin'ny terminal hafa misy an'io elanelana io ihany.
Famolavolana sy kalitao avo lenta miaraka a vy namboarina unibody vatana.
Mahagaga ary mpamaky rantsantanana miasa izay manaiky ny dian-tananay ao anatin'ny segondra an'arivony monja.
Iray amin'ireo efijery tsara indrindra fa afaka nanandramana tamina faran'ity vidin-javatra ity aho.
Mpandrindra Helio P10 miavaka izany, miaraka amin'ireo tsy azo iadian-kevitra RAM 3 GB Manome hery mihoatra ny ampy ho an'ity terminal ity izy ireo na dia mitifitra lalao izay heverina ho mavesatra aza.
Android 6.0 Marshmallow manta izay ny Launcher sy ny bara fampandrenesana na ny ridao ihany no novaina, manome azy loko mainty izay tena mety aminao tokoa.
Fahafahana manitatra ny fitadidiana fitahirizana anatiny amin'ny alàlan'ny fametrahana a Karatra fahatsiarovana MicroSD hatramin'ny 256 GB ambony indrindra.
Fomba fitahirizana bateria azo namboarina tanteraka avy amin'ny mpampiasa araka ny filany manokana.
Mety ho asehoy ny bokotra eo amin'ny efijery ary afeno ny bokotra ara-batanas ary koa manamboatra ny toerana misy azy ireo.
Bokotra voatokana eo ankavia, azo alamina hanombohana haingana ny rindranasa hifanaraka amin'ny mpampiasa.
4G LTE fifandraisana miaraka amin'ny fampidirana ny tarika 20 800 Mhz
Ny ratsy indrindra amin'ny UMI MAX
Raha ny ratsy indrindra amin'ny UMI MAX Mila milaza zavatra telo fotsiny aho aminao, izay mety tena manan-danja tokoa rehefa manapa-kevitra ny hividy ilay terminal ianao na tsia.
Ny voalohany sy ny kely indrindra dia ny herin'ny volan'ny terminal, fa na dia manana kalitao tsara aza izy io fa ny fahamarinana dia tsy ratsy mihintsy, dia ambany herinaratra loatra izany ka any ivelany na amin'ny tontolo misy tabataba kely dia tsy avelantsika hihaino ny atiny multimedia izahay, mandefa horonan-tsary ianao ary na izany aza ho sarotra ho antsika ny mihaino antso na fampandrenesana ho avy.
Ny faharoa amin'izy ireo, ary ilay manohina indrindra ny atodiko, dia rehefa mandalo faritra izay avela tsy misy fandrakofana maharitra isika, rehefa miverina amin'ny faritra misy fandrakofana tamba-jotra, ity UMI MAX ity dia tsy hifandray amin'ny tambajotra ho azy fotsiny ary tsy maintsy hiditra amin'ny maody fanamoriana sy hivoaka indray isika mba hahafahany mamantatra sy mifandray amin'ny tambajotran-telefaona mifandraika.
Ary farany, momba ny lafiny iray hanasongadinana ratsy ity UMI MAX ity dia hitantsika amin'ny fakantsary vokarin'i Panasonic ihany koa izany. Na ny fakan-tsary 5MP eo aloha na ny 13MP aoriana dia fakan-tsary izay mamela be dia be tadiavina amin'ny toe-javatra maivanaHatramin'ny tontolo iainana manjavozavo, na dia ampiasantsika aza ny FlashLED tafiditra ao, dia tsy ho vitantsika ny haka fakana sary mendrika satria tsy hahita na inona na inona mihitsy isika amin'ny alàlan'ny efijery terminal.
Herin'ny feo ambany
Sarany ny mifandray indray amin'ireo tambajotra finday
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » UMI MAX Famerenana
Kianjan'ny InstaEm Tsy misy vokatra ho an'ny Instagram dia hoy izy:
Valio ny InstaEm Square No Crop For Instagram